Ukumaketha okusebenzisana okuhlukahlukene okuvela ePodium | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 14, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Enye yamademo athokozisayo abanjelwe Ukuxhumeka Kwe-ExactTarget, izolo, bekuyisiboniso sangempela sokwenza okwenziwe uScott Dorsey, oyi-CEO, ngesikhathi senkulumo yokuvula.
UScott ucele wonke umuntu ukuba abhale leli gama ucwaningo kanye nabo ikheli le-imeyili kuya 38767 ukuthola iForrester Ucwaningo Lokukhetha Isiteshi ngo-2009 futhi Ulwazi lweKhasimende luyiMarketer Power.
Esikhathini sangempela, impendulo yomyalezo obhaliwe yathunyelwa emuva iqinisekisa isicelo futhi yabuzwa ukuthi ungathanda yini ukuthola umlayezo wezwi ovela kuDavid Daniels, Iphini Likamongameli kanye noMhlaziyi Oyinhloko I-Forrester Research. I-imeyili nayo ifike ivela kuScott Dorsey nemininingwane oyicelile (ngenhla).
Uma uphendule nge DAVID kumyalezo wokuphendula, ifoni yakho yakhala ngemuva kwemizuzu embalwa ngomlayezo wezwi olandelayo:
I-ExactTarget ifuna ukuthatha lolu hlobo lomkhankaso igxathu eliya phambili kulo nyaka ngokuvala ucingo phakathi kwalezi zinhlangano zombili ukuze nibe nengxoxo yangempela.
Lokhu ukusetshenziswa ngempumelelo kwe-imeyili, ukumaketha ngezwi nangamaselula emkhankasweni owodwa weziteshi eziningi. I-blogger yethu yezobuchwepheshe beselula, u-Adam Small, wenze imikhankaso efanayo kumakhasimende akhe e-Real Estate futhi wakhuphula amanani abo asondele kakhulu.
Tags: Ukuxhumanangqoscott dorseySMSimiyalezo
Amaphephandaba Asekucabangisise Ukubaluleka Kwawo